Gandaki Sanchar » कोरोना नियन्त्रणमा सहकार्य आवश्यक : नगरप्रमुख जोशी
कोरोना नियन्त्रणमा सहकार्य आवश्यक : नगरप्रमुख जोशी
कोरोना संक्रमण देशव्यापी रुपमा फैलिएको छ । कतै समूदायमा त कतै स्थानीय स्तरमा संक्रमणको दर बढेको छ । तर, पर्वतमा भने भयावह रुपमा फैलिन पाएको छैन । तर, कोरोनाको कारण दैनिक जनजीवन, व्यापार, व्यावसाय, शैक्षिक तथा यातायात क्षेत्र लगायतका गतिविधि ठप्प छन् । कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्न र आर्थिक कृयाकलापलाई चलायमान बनाउन स्थानीय तहहरुले कोसिस गरिरहेका छन् । हामीले कुश्मा नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रण गर्न र जनजीवनलाई सामान्य तर्फ फर्काउन के के काम गर्दैछ ? प्रस्तुत छ नमस्ते पर्वत साप्ताहिकका प्रकाशक रोशन तिवारीले कुश्मा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशी संग गरिएको कुराकानी ।
कुश्माबजारमा समूदायमा कोरोना फैलिन बाट रोक्न सकिएन नि ?
यहाँले महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । वास्तवमा समूदायमा कोरोना फैलिन नदिन कोशिस गर्दागर्दै एक दुई जनालाई संक्रमण पुष्टि भएपछि धेरैलाई समूदायमा कोरोना फैलियो भनेर चर्चा गर्न सजिलो भएको छ । तर, यस्तो संक्रमणलाई समूदायमा कोरोना फैलियो भनेर आत्तिनुपर्ने र त्रसित हुनुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दिन । अहिले एक दुई जनालाई संक्रमण हुँदैमा समूदायमा कोरोना फैलिएर बर्बाद भयो भन्ने अर्थमा बुझनु हुँदैन । यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि हामी सक्रिय भएर लागेका छौँ ।
कोरोना समूदायमा फैलिएको कुरा तपाईले स्विकार्नुहुन्न । तैपनि किन कुश्मामा नाकाबन्दी गरियो ?
कोरोनाको स्थिती परिक्षण गरेपछि मात्रै थाहा हुने कुरा हो । अहिले दुई जनालाई देखियो । उहाँहरुको यात्रा विवरण सहित कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्नेछ । कन्टयाक्ट ट्रेसिङ पश्चात आउने नतिजा पछि प्रतिबन्ध फुकुवा हुन्छ । यो नाकाबन्दी नभएर सजगताका लागि गरिएको सामान्य प्रतिबन्द मात्रै हो । ंदुई जनाको सम्पर्कमा आएका मानिसहरु संग अरु मानिसहरुको सम्पर्क नहोस । सिमित व्याक्ति बाट अरु धेरैमा यसको प्रभाव फैलिन नपाओस र अरु स्थानीय तहहरुमा मानिसहरु आवातजावत गर्ने भएकाले अन्त नफैलियोस भनेर पूर्व सावधानी अपनाएर कुश्माका ४ वडामा आउजाउलाई सिमित गरिएको हो । अहिले नतिजा राम्रो देखिन थालेपछि त खुल्यो ।
पर्वतमा अहिलेसम्म भयंकर रुपमा कोरोना फैलिन नसक्नु सुखद पक्ष हो । तर, लकडाउन देशैभरि खुलेकोले हामी सुरक्षित हुने स्थिती त रहेन नि ?
यो सबैभन्दा जायज पक्ष उठान गर्नुभयो । वास्तवमा पर्वतमा कोरोना नियन्त्रणमा रहनुमा नागरिक सचेतनालाई जस दिनुपर्छ । नियन्त्रणमा खटिने जनप्रतिनिधी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जिल्ला प्रसासन कार्यालय, अन्य कार्यालयका कर्मचारी, सञ्चारकर्मी लगायतका आफ्नो ठाउँबाट खेलेको भूमिकालाई पनि जस दिनुपर्छ । कुश्मामा पुलिङ क्वारेण्टाईन बनाएर सबै आगन्तुक व्याक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम हो । यदि हामीले बिदेशबाट फर्किएकालाई आफ्नै स्थानीय तहमा आफ्नो सुरले जाउ भनेर पठाएको भए पर्वतमा अहिले सम्म स्थिती खराव हुन्थ्यो । अब फेरि देशभरि लकडाउन खुल्ला भएपछि संक्रमणको खतरा बढेको भनेर मानिसहरु डराईरहेका छन् । अव कोरोना बाट बच्ने उपायहरुको पालना गर्नुपर्छ । जहिले सुकै बन्द गरेर हुँदैन सावधानी अपनाएर काम गर्नुपर्छ भनेर लकडाउन खुल्ला भएको हो । हामीले आफु र समूदायलाई सुरक्षित बनाउने उपाय आँफै अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार एक्लै भिड्नु परिरहेको छ । स्थानीय सरकार संग प्रदेश र संघ सरकार सहकार्य गर्न चाहाँदैनन् । माथिल्लो सरकारले हामीमाथी शासन मात्रै गर्ने हैन सहकार्य पनि गर्न चासो देखाउनुपर्छ । सबैको सहकार्यले मात्रै महामारीलाई पराजित गर्न सकिन्छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा कुश्मा नगरपालिकाले गरेको प्रयास फलदायी भए कि कर्मकाण्डी भए ?
तपाईको मास्क खोई अभियान चलाएका छौँ, समूदायमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले सचेतना जगाउन टोलटोलमा शिक्षा दिने कार्यक्रम चलाउनुभयो, सुरक्षाकर्मीहरुले यात्रामा निस्किनेहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरुको बारेमा जानकारी बाँड्नुहुन्छ , हाम्रा सबै वडामा वडाध्यक्ष तथा सदस्य साथीहरु रातदिन खटिनुभएको छ, स्वास्थ्यकर्मीहरुले भेटेका मानिसहरुलाई स्वास्थ्यकै बारेमा सम्झाउनुहुन्छ ,चोकचोकमा प्रहरीले मास्क लगाएर हिँड्नुहोस भनेर सम्झाईरहेका छन् । रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका मार्फत चेतनामुलक सन्देश, अन्तरवार्ता, सूचनाहरु प्रकाशन र प्रसारण भैरहेका छन् । त्यसवाहेक विभिन्न प्रिण्ट सामाग्री र ब्रोसर बनाएर बाँड्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ । यो जति गर्दै गयो त्यति सिक्दै जाने र अभ्यास गर्दै जाने विषय रहेछ के । पर्वतमा कोरोना नियन्त्रणमै रहेको कुराले पनि हाम्रा प्रयास फलदायी भए भनेर दाबी जो कसैले गर्न सक्दैन र ?
यो महामारी नियन्त्रणमा यहाँहरुको खर्च पारदर्शी छ त ?
हामीले जुनसुकै काम पारदर्शी गरौँ भनेर लागेका छौँ । कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापनमा हामी मितव्ययी भएर लागेका छौँ । अरु स्थानीय तहभन्दा जनसंख्या धेरै, राहात वितरण पनि धेरै, बिदेशबाट आएका व्याक्ति धेरै, आईसोलेसन, क्वारेण्टाईन कुश्मामै धेरै, औषधी, पीपीई देखि अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिद लगायतका कारण अन्य स्थानीय तहको भन्दा बढि खर्च देखिएको छ । अहिलेसम्म १ करोड १८ लाख खर्च भएको छ भने हामीले स्थापना गरेको कोषमा १ करोड ४४ लाख भन्दा बढि रकम मौज्दात छ । भविष्यमा संकट आउन हुँदैन तैपनी आउन सक्ने संभवना कायमै रहेकोले हामीले मितव्ययी तबरले खर्च गर्ने र जोहो गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।
राहात वितरण कार्य रोकियो कि जारी छ ?
हामीले पहिलो चरणमा अभियानकै रुपमा सबै वडामा राहात वितरण गरेका हौँ । अभियानमा छुटेकाहरु र बढि समस्या भएकालाई बिचबिचमा पनि वितरण गर्दै गएका छौँ । तत्कालका लागि राहात वितरण भन्दा पनि मजदूर र श्रमिक बर्गलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले विकास निर्माणका काम सुचारु गराएका छौँ । राहातले मानिसहरुलाई परनिर्भर बनाउनुभन्दा काम गर्न दिने उदेश्य हो । तर, समस्यामा परेकालाई अवस्था हेरेर राहात दिने काम रोकेका छैनौँ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा माथिका सरकार र छिमेकी स्थानीय सरकारहरु संग केहि सहकार्य भैरहेको छ ?
जिल्लाका सातै स्थानीय तहहरुका बिचमा सरसल्लाहका साथ हामी विपद न्यूनिकरणमा जुटेका छौँ । हामी अभिभावक जस्तै बनेर समन्वय गरिरहेका छौँ । तर दुखका साथ भन्नुपर्दा प्रदेश र संघ सरकारले हामीलाई सहयोग गरेका छैनन् ।सबैको सहकार्यले मात्रै कोरोना पराजित गर्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । एउटा व्याक्ति, संस्था वा सरकारले चाहेर मात्रै विपत्तीलाई पराजित गर्न सकिन्न । हामी सबै मिलेर अगाडी बढे कोरोनामा सामूहिक लडाई लडिरहेका छौँ ।
उक्त अन्तरवार्ता नमस्ते पर्वत साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
प्रकाशित मिति ९ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०१:०८